Ukuphupha ngeCane Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kwiintsuku zakudala, ukuhamba kweentonga kwakuyinxalenye yomfanekiso olungileyo wendoda. I-cane yayihlala inezibonelelo ezongeziweyo. Kuthiwa, umzekelo, ukuba ucinga ukuba uThomas Hobbes wayesoloko ephethe intonga yakhe, kuba kwi-pommel kwakukho inki kunye nepeni apho angabhala khona iingcinga zakhe. Namhlanje, nangona kunjalo, uswazi oluhle luye lwanyamalala kubomi bethu bemihla ngemihla.
Ngoku, imijelo isetyenziswa ikakhulu njengesixhobo sokuhamba, iipali zokuhamba, okanye endaweni yeentonga, kodwa kunqabile ukuba zisetyenziswe njengemisimelelo. Ezi zinti zenziwe ngezinto ezahlukeneyo kakhulu. Umzekelo, ezi zinokwenziwa ngentsimbi engenasici okanye ngoqalo. Izinto ezinokubakho zinokudlala indima ekutolikeni kwamaphupha kwaye zibonelela ngemiba eyongezelelweyo.
Kwakhona, induku inokuvela ngokunxibelelene nabantu abohlukeneyo ngexesha lokulala. Umzekelo, sinokuyibona ezandleni zikayisekazi, utata okanye iqabane lethu. Ukutolikwa kwale miqondiso yamaphupha kufuneka kusetyenziselwe uhlalutyo lwamaphupha olwandisiweyo.
1 Uphawu lwephupha «intonga yokuhamba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intonga yokuhamba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «abasebenzi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intonga yokuhamba» - ukutolikwa ngokubanzi
Intonga njengophawu lwephupha ihlala ifuna ukutsala umdla womntu ophuphayo kwinto yokuba ukwinto ethile el mundo yomlindo. Uncedo iyimfuneko. Kuya kufuneka ubuze malunga noku kwaye ungazibambi. Ngokukodwa ukuba umntu olele uthembele ngentonga okanye intonga yokuhamba ephupheni lakhe, le nkcazo kufuneka isetyenziswe.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kukwatolika uphawu "lwabasebenzi" njengophawu lokuqinisekisa ikhontrakthi kakuhle. Kungenxa yokuba ukuba oku kungenwe ngaphandle koviwo oluneenkcukacha, oku kungakhokelela kukungathandeki okukhulu kwabo bachaphazelekayo.
Nabani na osebenzisa intonga yesandla ephupheni kungekudala uza kuba kwibhunga kwaye uncedo ukuxhomekeka kwabanye abantu. Ukufihla intonga ephupheni, umzekelo kwigumbi eliphezulu, kuhlala kubonwa njengophawu lweentloni. Umphuphi uziva engonwabanga ekuvukeni ubomi, njengoko eza kufuna uncedo.
Ukuba ugqirha umisela intonga okanye intonga yokulala umntu olele ebuthongweni babo, mhlawumbi emva kotyando, i i-nostalgia ukubonisa uncedo. Umphuphi ngokwakhe akavumanga esidlangalaleni ukuza kuthi ga ngoku, kuphela ngempembelelo yomnye umntu anokuyivuma.
Ukubethwa okanye nokubulawa ngentonga njengephupha kuhlala kufuzisela ukuba kungekudala uza kufundiswa isifundo, nokuba usifumene okanye awusizuzanga.
Uphawu lwephupha «intonga yokuhamba» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu "abasebenzi" luhlala lubonwa njengophawu lobudoda. Apha lo mfanekiso wephupha ubhekisa kwi iminqweno yesini kunye neemfuno zokulala. Intonga okanye abasebenzi ephupheni baqondwa njengophawu "lohambo" ekufuneka umphuphi alwenze ebomini bakhe ukuze akhule ngokomoya.
Ukuba umntu ulandelwa ephupheni ngumntu omnyama ngentonga, esenza ingxolo enkulu, oku kunako ngokuhambelana nohlalutyo lwengqondo lephupha njengenye isicelo iqondwe ukujongana ngakumbi neemvakalelo zakho ezicinezelweyo okanye ezingamkelekanga.
Nabani na obona abanye abantu abanezinto zokuhamba ephupheni kufuneka azi ukuba ngaphambili babekhathalele kakhulu abanye kwaye bengakhange bayithathele ingqalelo inkqubela-phambili yabo.
Ukubulala abantu abanesiphatho esikhubazekileyo ephupheni kufuna ukuba umntu olele phambi kwakho ukuhlaselwa lumkisa ebomini bokuvuka. Akufuneki ubanike nje, kodwa ubalawule ngcono.
Ukuba ucofa intsimbi ngelixa ulele ngentonga, kufuneka uqaphele ukuba ufuna uncedo lwabanye ukuze benze utshintsho ebomini bakho. Intonga yomalusi, esetyenziswa njengoncedo lokuhamba ephupheni, ibonisa amaxesha okuphumelela.
Uphawu lwephupha «abasebenzi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kubona kwisimboli sabasebenzi uphawu lomnye. yokomoya igunya. Ngoncedo lwezi, umphuphi uya kuba nakho ukuqhubela phambili kwindlela yakhe yophuhliso.